Ezi zezinye zeyona misebenzi mihle yeAliexpress yoSuku loSingles | Iindaba zeGajethi
Nge-11 kaNovemba, oko kubizwa ngokuba Usuku olulodwa, malunga nathi sikuxelele ulwazi oluninzi kweli nqaku. Iivenkile ezininzi zaseTshayina ezikwi-intanethi zisebenzise ithuba lalo mhla ukubonelela ngesixa esikhulu semali kunye nezaphulelo kuninzi lweemveliso abazithengisayo.
I-Aliexpress yenye yezo venkile zingenakuphulukana nokuqeshwa Kwaye njengeGearBest kunye nabanye abaninzi, awuyi kuphoswa kukuqeshwa ngenani elikhulu lezinto ezinomdla esiza kuzama ukukuxelela ngazo kweli nqaku, ngokuqinisekileyo siya kuzama ukuzihlaziya njengoko iintsuku zihamba.
Ivenkile eyaziwayo yaseTshayina yenze iphepha elikhethekileyo kuzo zonke izibonelelo elizilungiselele olu suku, zifana kakhulu noLwesihlanu oMnyama okanye uSuku lweManqindi, apho singaphumelela khona amakhuphoni esiwasebenzisayo ekuthengeni esikwenzayo nalapho sinokubona khona izinto ezinesaphulelo. kunye namaxabiso akhethekileyo.
Apha sikubonisa ifayile ye- phambili encinci uAliexpress asibonise yona ngezibonelelo esiya kuba nazo nge-11 ezayo kaNovemba;
Ii-headphone zeBluedio zincitshisiwe zaya kwi- € 91.53 xa ixabiso laso eliqhelekileyo li- $ 138.69
Iprojektha ye-AUN AM01C yehliselwe kwi- € 72.44 xa ixabiso laso eliqhelekileyo li- $ 142.02
IXiaomi Mi Band yehliselwe kwi- € 23.72 xa ixabiso laso eliqhelekileyo li- $ 30.04
ICubot Max yehliselwe kwi- € 109.56 xa ixabiso laso eliqhelekileyo li- $ 138.69
Itshaja engenazingcingo yehliselwe kwi- € 18.82 xa ixabiso laso eliqhelekileyo li- $ 36.90
Ikhamera yezemidlalo yehliselwe kwi- € 225.13 xa ixabiso laso eliqhelekileyo li- $ 251.39
Iiglasi zeXiaomi VR zincitshisiwe zaya kwi-23.27 € xa ixabiso laso eliqhelekileyo li- $ 46.54
I-LETV Le 2 yehliselwe kwi- € 179.00 xa ixabiso laso eliqhelekileyo li- $ 203.41
I-Elephone S3 incitshisiwe yaya kwi-119.27 € xa ixabiso laso eliqhelekileyo li- $ 138.69
IXiaomi MiPad yehliselwe kwi- € 125.21 xa ixabiso laso eliqhelekileyo li- $ 144.12
Ngaphandle kwamathandabuzo, kwaye njengoko kwenzekile kwimeko yeGearBest, olu suku lweeNgoma lulayishwe izibonelelo kunye nezaphulelo, ngokuqinisekileyo sonke sisebenzisa ithuba, nangona oko kuya kufuneka sikhawuleze kwaye uninzi lwezibonelelo ezilungileyo zilinganiselwe.
Uza kuthenga ntoni kule-11 kaNovemba ezayo ngeSingles Day kwiAliexpress?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ezi zezinye zeyona misebenzi ibalaseleyo yeAliexpress yoSuku lweeNgoma
Ngoku ungathumela iiFoto eziBukhoma njengee-GIFs kwi-WhatsApp ye-iOS